Ngexesha elidluleyo kwiNguqulelo yesiGrike
Ukuthatha inxaxheba kwangaphambili kwisiNgesi ngegrama
Ngesi-grammar yesiNgesi , iqela elidlulileyo liyingxenye yesithathu yesenzi yesenzi , edalwe ngokungeza-- d , okanye -t kwifom yesiseko sesenzi esivamile . (Iifom ezithatha inxaxheba zentsenzi eziqhelekileyo-njengokuba zibukeka , zisebenza , kwaye zinqwenela- zifana nexesha elidlulileyo .) Ebizwa ngokuba yi "ed" ifom okanye "ed" ithatha inxaxheba .
Iifom ezithatha inxaxheba zentsingiselo ezingaqhelekanga zineziphelo ezahlukeneyo, kubandakanywa -n ( kuthiwa ), -nokulala , kunye -n ( ephukile ).
(Uza kufumana iifom ezithatha inxaxheba zezenzi eziqhelekileyo eziqhelekileyo ezifakwe kwiiNqununu zeeNqununu zesiLwimi .) Elinye ixesha elidlulileyo kwisenzo esingaqhelekanga "ifomu" .
Inxaxheba esedlulileyo isetyenzisiweyo kunye nomncedisi unayo , okanye, okanye ufanele uvelise into efanelekileyo . Ukongeza, iqela elidlulileyo lisetyenzisiwe ngefom yoncedisayo ukuba livakalise ilizwi elincinci .
"Yonke into eyenziwe yinto yokuba i-Psyst, ekufumaneni iliso likaMnu Cootes kunye nebhastile esebenza kwelinye icala, yaqhuma phambili, yahlutha isitulo, yambetha umntu onobuhlungu phezu kwentloko nayo, yamkhulula kwipistoli yayo, yaxhuma kwisigca, wasusa umvolvusi olele apho, kwaye ngoku, ephethe zombini izixhobo kwisimo sengqondo esichengeni, wayebhekiselele kuye ngokugqithiseleyo ngeglasi elikhanyayo. "
(PG Wodehouse, Mshiye kwiSmith , 1923)
Ukuthatha inxaxheba kwangaphambili kwamaLwimi
"Igumbi lekhonkrithi elingenabalabala ligcwele ilanga."
(Flannery O'Connor, "iGreenleaf." I-Kenyon Review, ngo-1957)
"Isiqhelo sifana nesitora esingaqhelekanga, esingathandekiyo, esigcwele abantu abalindileyo abaza kukuzisela izinto ongazange uzicelele kwaye azifuni."
(Lemony Snicket, i- Horseradish: Iinyaniso ezintle Azinakuziphepha.HarperCollins, 2007)
"Ndihlala ndikumangaliswa kukuba abantu baya kukhetha ukuhlala phambi komabonwakude kwaye baxakeke ngezinto ezithintela iingqondo zabo."
(U-Alice Walker, ocatshulwe nguBrian Lanker kwi- I Dream World: Iimpawu zeNkwenkwezi eziMnyama eziguqule iMelika , ngo-1989)
" Ukuhlanjululwa ngokungenakucaciswa ngokuqhelekileyo ngabalimi abathile, i-gnome ivame ukujongwa njengomhlobiso ongekho nto, ongakhange uncedwe ngokusungulwa kwenyanga kunye ne-gnomes."
("Amanqaku kwiSiqithi esincinci: Izinto ezenza iBritish Great." I-Independent , uAgasti 28, 2008)
"Ingqondo ephazamisekayo ayikwazi ukugxila kwikhondo lokuphumelela."
(Golden Golden, Imemoirs of Geisha . Knopf, 1997)
"Nangona abaninzi baye bazama , akukho namnye ongakucacisa into yokuba inzululwazi, enokwenza okuninzi, ayikwazi ukugqiba ukuba yintoni okufanele iyenze."
(UJoseph Wood Krutch, Ulinganiso loMntu , 1956)
Ukuthatha inxaxheba kwixesha elidlulileyo lweeVenki ezingaqhelekanga
"Imfesane kufuneka igubuke ngaphakathi."
"I-agent ye-real estate yayineenwele ezibomvu, i-bottom down, kunye nesigqubuthelo sokwenza okugqithisiweyo njengokungathi ukufihla ubutsha bakhe."
(UJohn Updike, "UkuGcina." Playboy , 1980)
" Ulahlekelwe emthunzini weeshelufu, ndiphantse ndiwa phantsi."
(URobin Sloan, uMnu Penumbra we-24-Hour Bookstore . Farrar, Straus noGroux, 2012)
" Hlahla entsini yento engenanto entwasahlobo yoMgqibelo, ndizahlula iziqu ze-milkweed kwaye ndacinga ngeentsontsho kunye nemigodi ye-peach nokufa kwaye apho ihlabathi lihamba khona xa ndivale amehlo. isithunzi esasiphambi kwam xa ndishiya indlu sinyamalale xa ndibuya. "
(Toni Morrison, i -Bluest Eye .) UHolt, uRinehart noWinston, 1970)
Iintsingiselo kunye neFom yeNxaxheba yangaphambili
" Inxaxheba esedlule ingabonakalisa okokudlulileyo, okwangoku, kunye nexesha elizayo." Ixesha elidlulileyo lithatha inxaxheba kunye neendlela ezihamba phambili : (Vincent F. Hopper, et al., Izihloko zeNgesi , 5 we-2000)
Ukhohlisiwe , uya kuba nomsindo. [izenzo zombini]
Ukuxhatshazwa ngesimo sakho sengqondo, andinakukunceda. [zombini izenzo okwangoku]
Ukuxhatshazwa ngesimo sakho sengqondo, andinakukunceda. [zombini izenzo kwixesha elidlulileyo]
Emva kokufunyanwa , isela livuma.
Ukubukeleka , unokuzenza nje ukuba ungabalulekanga.
Ukuphela kwexesha eliqhelekileyo kwisiNgesi saseNgilani nesiBrithani isiNgesi: -eye kunye -t
" izenzi: ixesha elidlulileyo -t / -ezo zombini iifom zokuphela ziyamkeleka kwisiNgesi saseBrithani , kodwa i-ifom ilawulwa ngokutshiswayo , ifundwe, i-spelled- kwimeko yesiNgesi esebenzisa isiNgesi : iyatshiswa, ifundwa, iphepheni . Ukusetyenziswa kweNgesi- kwithuba elidlulileyo kunye negalelo elithile elidlulileyo lwezenzi ezithile zentshukumo , isiNgesi saseYurophu esithukuthelayo sisebenzisa isi-spelling-spelling- quit, sweat .
Ezinye izenzi zineendlela ezahlukileyo zexesha elidluleyo kunye nexesha elidlulileyo elibandakanyekayo, umz., Ixesha elidlulileyo lokudiba lidibene kwisiNgesi saseBrithani kodwa ihobe kwisiNgesi saseMerika. "
( Isikhokelo sendlela yoQoqosho , i-10 ed.
Iifom ezingaphelelanga zeNxaxheba eziDlulileyo
"Kwezinye iilwimi ezingaqhelekanga , ixesha elithile elidlulileyo kunye neengxenye ezedlulileyo ezingafaniyo kwiiNgesi eziqhelekileyo ziyafana. IsiNgesi esiqhelekileyo njengoko ndazibona kwaye ndenze ngako.Kunokwenzeka ukuba ukuqhubela phambili kwimbali kwenzeka ngokuthe ngcembe ngolwimi, apho iifom zexesha elidlulileyo kunye neenxaxheba ezedlulileyo ezifanayo ziyafana. ifilimu eyaziwayo, u- Honey, ndayitshisa i-Kids, ndisebenzisa oko kwakuye kwacingwa njengento eyadlulayo, inqabileyo , endaweni yexesha elidlulileyo, i- shrank . "
Amanqaku okucaphuna (iiKomishini ezingenayo)
I-Rhetoric efanelekileyo: Izivakalisi eziqinisekisiweyo
I-Passive Infinitive (igrama)
Iinkcazo ezongezelelweyo kwii-Essays neNtetho
Ukuqhekeza iiBhontshi eziMbi
Iimpawu zeMnyama ezimangalisayo zeNeptune
Umlinganiselo we-Empire Mughal yaseIndiya
I-Armstrong Atlantic State University Admissions
Ukucaciswa kweeTests zeWechsler
7 Amazwi okugqibela kaYesu
Amagama amathathu Ukuphuculwa
IFilimu ifaneleka njani kwi-Oscar engcono kakhulu?
Ama-Olympic Gymnastics Medalists: Abadlali be-All Around Around Champions
I-Quiz Quick kwi-History of the English Language
Ukudlala njani umdlalo we-Umbrella kwiGalofu